Fanatoranana voajanahary, Cloves: fananana, fampiasana ary maro hafa! | Nutri Diet
Aron | | soso-kevitra, aretina, sakafo, fahasalamana
Amin'ny fitsaboana voajanahary ny jirofo izy io dia mitana toerana be olona, ​​toy ny fanatoranana voajanahary, mihatra indrindra amin'ny fanaintainan'ny nify, satria raha apetraka amin'ilay nify voakasik'izany dia mampihena be ny fanaintainana.
Ny fitambaran'ny simika ao aminy dia ireo ampiasain'ny mpitsabo nify izay mampiasa nalaina jirofo satria manana menaka miovaova antsoina hoe "eugenol", Izay manome azy ireo fananana fanatoranana.
Saingy tsy mijanona hatreo ny hatsarany amin'ny fahasalamana, satria manana fananana fanafody tena miavaka momba ny rafi-pandevonan-kanina izy, ampiasaina betsaka amin'ny fanafody sinoa amin'ny karazana olana mifandraika amin'ny fandevonan-kanina, misolo tena ny sakafo matsiro, izany dia mandrisika ny fahazotoan-komana , zavatra tena manandanja amin'ny olona mandroso.
Izy io dia antispasmodic, toe-javatra tena ilaina amin'ny tranga mangatsiaka ao amin'ny vavony izay mahazatra ny zaza, mifehy ny fisaleboleboana, mandoa ary fanoherana ny katsentsitra.
Ny jirofo dia malaza indrindra amin'ny tontolon'ny fahandroana sakafo noho ny fofony manitra sy miaro azy ireo, ny jirofo dia maneho bebe kokoa noho ny zava-manitra, satria tena harena ho an'ny sakafo sy ny fahasalamana.
1 Fananana jirofo
2 Inona no atao hoe jirofo?
3 Manana fananana aphrodisiac ve izy io?
5 Tombony azo avy amin'ny jirofo
6 Contra contra clove
7 Ahoana ny fakana jirofo
8 Aiza no hividianana jirofo
Ny cloves dia manana fananana maromaro hodinihina:
Misoroka ny aretin-kozatra: Noho ny mpiorina amin'ny kintana, eugenol, dia manampy antsika hisoroka aretim-po sasany izany.
Anti-milaza zavatra izy io ary mampihena ny siramamy ao amin'ny ra.
Es manan-karena vitamina K, E na C ary Omega 3 toy ny amin'ny mineraly. Manezioma, potasioma ary kalsioma koa ao. Tsy manadino ny vitamina B1, B2, B3 ary B5
Mandevon-kanina be izy io ary manakana ny fivontosana ary koa ny fandoroana. Fisorohana ny fisaleboleboana sy fandoavana.
Mampihena ny aretin-nify raha ampiasaina ho fanasana vava. Toy izany koa, hikarakara ny fofonaina izy io ary hiaro antsika amin'ny fery amin'ny vava.
Manala ny aretin'andoha
Inona no atao hoe jirofo?
Izy io dia tonga lafatra amin'ny esory ny lalan-drivotra rehefa manana sery na sery isika.
Izy io koa dia ampiasaina hanasitranana ireo aretina azo avy amin'ny fivaviana sasany.
Amin'ny fananana fananana analgesic dia voalaza manohitra fanaintainana. Anisan'izany ny aretin-nify izay manelingelina foana.
Toy izany koa, miaro ny vava, misoroka ny fofona ratsy ary mikarakara ny siligaoma.
Tena mety ny mihetsika manohitra ny holatra toy ny tongotr'ireo atleta.
Ho an'ireo rehetra olona misasoka rehefa mandeha, izy ireo dia afaka maka infusion izay misy jirofo iray sotro.
Safidy mety indrindra koa ny manadino ny moka.
Averina indray fa mety tsara ny fahaizany mampitony manohitra ny tsy fahitan-tory.
Miady amin'ny ratra amin'ny hoditra.
Mampihena ny hemôrôida.
Manakana ny fihenan'ny volo, satria hanamafy ny fibre volo izany.
Manana fananana aphrodisiac ve izy io?
Eny, ny jirofo dia iray amin'ireo zava-manitra mampiavaka ny aphrodisiac. Izany ve dia handrisika ny filan'ny nofo. Ho fanampin'izany, amin'ity tranga ity dia voalaza fa ny jirofo dia mpiray dina tsara amin'ny fiterahana, mampitombo sy manatsara azy. Tena soso-kevitra indrindra ho an'ireo izay manana olana amin'ny fananganana. Amin'ny ankapobeny, afaka miteny isika fa manana ireo fananana erotika ireo izy ary koa manentana.
Ny jirofo dia ampiasaina amin'ny fomba fahandro mahandro maro. Ny marina dia be dia be ny tombontsoa azo resahina koa fa zara raha manana kaloria. Izay mahatonga azy io ho tonga lafatra mba hampiarahana amin'ny sakafo mampihena lanja. Izy io dia fomba iray tonga lafatra hanafainganana ny metabolisma sy hifehy ny fandevonan-kanina. Indrindra rehefa misotro azy izahay dia mila fotsiny mahandro rano litatra iray miaraka amina hazo kanelina telo sy jirofo vitsivitsy. Avelanao hipetraka mandritra ny roa andro izy avy eo aolaho.
Tombony azo avy amin'ny jirofo
Satria tsy olana fotsiny ny fitondrana azy io amin'ny sakafo antoandro na, amin'ny fampidirana an-tsokosoko isan-karazany. ny mitsako jirofo Izy io koa dia mamela antsika tombony maro izay tsy maintsy raisintsika.
Amin'ny alàlan'ny fitsakoana jirofo dia hahazo tombony amin'ny siligaoma ianao ary avelao ho any aoriany ny halitosis.
Hanatsara ny fandevonan-kanina izy io satria io dia fomba tonga lafatra hanentanana ny famoahana anzima fandevonan-kanina. Ka hanao veloma ny gasy isika.
Ampirisihina mba hitsako jirofo alohan'ny hanaovana firaisana. Fahazarana be mpampiasa any amin'ny faritra maro any India izy io.
Mandritra ny 15 minitra eo ho eo ary alohan'ny hisakafoanana dia tsara ny mitsako jirofo mba hamonoana bakteria.
Rehefa marary tenda isika, izay ateraky ny sery, dia tsy maintsy manana fantsika toy izany isika amin'ny tanana.
Contra contra clove
Na dia eo aza ny tombony be dia be, araka ny efa nanehoanay hevitra dia tsy maintsy miresaka momba ny fanoherana koa isika. Tsy tokony hatao izy ireo ho an'izay rehetra manana karazana olana ara-pahasalamana toy ny aretina na olana amin'ny atiny ary koa ny vavony: fery na fivontosan'ny tsinay. Tsy atolotra ho an'ny vehivavy bevohoka na mety bevohoka koa izy ireo. na mandritra ny fotoana fampinonoana.
Tsy handray jirofo ianao raha manana karazana aretim-pisefoana. Etsy ankilany, ho an'ny olona tsy manana aretina, azon'izy ireo atao ny mandray an'io zava-manitra io fa amin'ny antonony foana. Satria raha manararaotra ireo singa ao aminy isika, fa tsy mitondra tombony ho antsika, dia ny mifanohitra amin'izay no izy. Tadidio fa raha zava-dehibe ny habetsahana dia tsy taraiky aoriana ny fahita matetika. Tsy tokony haka azy ireo mandritra ny fotoana lava isika satria mety hitarika karazana alergie na hamamoana sasany.
Ahoana ny fakana jirofo
Araka ny efa nolazainay taminao, amin'ny endrika fisotroana dia iray amin'ireo safidy lehibe izy io. Raha te hahatratra vokatra tsara ianao raha ny fihenan'ny lanja dia azonao atao ny maka vera iray isan'andro ho fampidirana ary amin'ny maraina. Tsy tokony hataontsika be loatra ilay izy, satria misy a eugenol be doka ary metifyl salicitate, izay no manome tombony amin'ny analgesika. Noho izany dia mila mitandrina hatrany isika. Raha nilaza ny vera iray ho fampidiran-dresaka izahay, dia lazainay aminao fa na dia vitsy aza ny tànana dia mety tsara ny manampy sakafo. Koa satria kely foana ny habetsaky ny volantsika dia hanondrotra ny fananany lehibe isika.
Aiza no hividianana jirofo
Mora be ny mahita jirofo. Koa satria ny fivarotana lehibe rehetra fantatray dia amidio izy. Na amin'ny siny na amin'ny fonosana kely mba hitehirizana tsara kokoa. Misy ihany koa magazay an-tserasera Amidiny betsaka ny vokatra. Saingy tsy isalasalana fa, izy rehetra ireo dia hitondra antsika ny tombony sy ny fananana noresahintsika, afaka miova kely ihany izy ireo amin'ny vidiny iray hatramin'ny orinasa iray hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Fanatoranana voajanahary, Cloves
RsotoU dia hoy izy:
Efa nanandrana azy ho fanafody fanatoranana aho ary mahavariana tokoa.
Mamaly an'i RsotoU
Elia Linares Osorio dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra ny fomba na ny fomba fampiasana ny fantsika ho fanatoranana ao ambadika. Misaotra !!
Valiny tamin'i Elia Linares Osorio
Alan Huaman Dagger dia hoy izy:
Androany dia marary areti-nify tsy mbola azoko mihitsy aho, tao anatin'ny 28 taona niainako, sambany aho nitady zavatra hampitony azy, ka dia nitady fanafody any an-trano aho noho ny aretin-nify, ary ny voalohany nivoaka dia ity karazany mahafinaritra ity. Ary ny fananako fananana ara-pahasalamana mahasoa hafa dia nahagaga ahy an'ity zavatra kely ity ... tamin'ity no nahazoako lesona lehibe: imbetsaka isika dia manana zavatra sarobidy be manodidina antsika, saingy noho ny tsy fahampian'ny fahalalana dia mieritreritra isika fa tsy manana na inona na inona ary isika dia mitovy amin'ny mpangataka.
Valiny tamin'i Alan Huamán Daga
EHP dia hoy izy:
Tena tsara, manatsara ny areti-nify efa ho eo izao… izao dia miaina izany aho… Misaotra.
Valiny amin'ny EHP
Emildo dia hoy izy:
Ahoana no fomba fitrandrahana ny jirofo?
Mamaly an'i Emildo
Salama, ahoana no ilazanao ny fanafody fanatoranana an-trano hanamaivanana ny aretin-nify?
Te hahafantatra izay fomba fahandro namboarina azoko ampiasaina hanamaivanana ny aretin-nify aho